Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ice Cube Man Vs Machine: Fandatsahana NFT Vaovao Voalohany
Androany, ny mpilalao sarimihetsika, ny fialam-boly ary ny mpanorina BIG3 Ice Cube dia nanambara fa nikatona ny famoahana NFT voalohany nataony, Man VS Machine tamin'ny fanontana rehetra lany tao anatin'ny 24 ora.
Ny drop, fiaraha-miasa amin'ny mpanakanto malaza Trevor Jones sy ny NFT Marketplace Nifty Gateway, dia iray amin'ireo nahomby indrindra teo amin'ny tantaran'ny sehatra, nahazo tombony mihoatra ny $1.6 Million. Nisy fahalianana lehibe ho an'ny fanontana rehetra, miaraka amin'ny fidirana ho an'ny tsirairay mahatratra ambaratonga miavaka.
• Ny 12 Gold Edition NFT's ($15,000 tsirairay avy) dia nahangona mihoatra ny 400 isa isaky ny andiany
• Ny 40 Silver Edition NFT's ($5,000 tsirairay avy) dia nanangona mihoatra ny 1000 isaky ny andiany
• Ny 100 Bronze Edition NFT's ($2,000 tsirairay avy) dia nahangona lahatsoratra mihoatra ny 2000 isaky ny fanontana
• Ny Open Editions, ho an'ny tompon'ny sanganasan'i Trevor teo aloha, dia namidy maherin'ny 12,000
Ity firotsahan'ny NFT ity dia ampahany amin'ny ezaka lehibe ataon'ny Ice Cube mba hitohy hatrany amin'ny olana sy indostria rehetra mifandraika amin'ny kolontsaina ankehitriny. Avy amin'ny fanehoana famporisihana amin'ny indostrian'ny sarimihetsika, ny fampitomboana ny ligin'ny basikety BIG3, ary ny maha-mpandray anjara mavitrika azy amin'ny metaverse, Ice Cube dia manohy ny maha-mpitarika ny indostria.
Ny NFT's avy amin'ny Man vs Machine dia hanohy hiaina ao amin'ny sehatra Nifty Gateway ary azo hatonina ny tompony mba hamidy indray. Ny edisiona ao amin'ny tsena faharoa dia efa nankasitraka efatra na dimy heny ary namidy $ 1 tapitrisa fanampiny.